China oche akpụzi ụlọ ọrụ na-emepụta | HEYA
Ahịhịa Nwere Ike oldkpụzi
Ezinaụlọ ndị ọzọ
Ngaji / ndụdụ / mma akpụzi
Mkpa Wall akpụzi
Kitchenware Ndị ọzọ na-akpụzi
Industrylọ ọrụ mmepụta ihe na ọrụ ugbo
Flower ite akpụzi
Ebu ndị ọzọ
Ebube na-enweghị ogwe aka
Beach oche akpụzi
Oche Ọgwụ akpụzi
N'èzí Oche Ọgwụ Ebu
Plastic oche akpụzi
Ratten Plastic oche Mould
Oche ebu na-ezo aka ebu eji na-emepụta oche Mould na injection ịkpụzi igwe. Dị ka dị iche iche ngwaahịa ekwekọghị, e nwekwara stackable plastic oche Ebu, mpịachi oche injection ebu emeputa, osimiri oche ebu, wdg
Taizhou Heya akpụzi Co., Ltd dị ka abụrụ ebu n'ichepụta ụlọ ọrụ, e na-adọrọ ahụmahụ nke ndị ọgbọ ya mgbe tụnyere nke ụlọ ọrụ onwe echiche na nọgidere mma àgwà nke oche akpụzi.
The ụlọ ọrụ nwere ike hazie oche akpụzi maka ndị ahịa dị ka ndị ahịa chọrọ na gbakwunyere site ọkachamara CAD / CAM / CAE imewe, CNC kọmputa nhazi center, elu-ọsọ nhazi center, CNC lathe, EDM, waya ọnwụ, igwe igwe na ndị ọzọ na-elu-nkenke nhazi akụrụngwa.
Gwa gị ihe ị chọrọ nke ngwaahịa & ebu na ihe ọmụma zuru ezu banyere kenha injection ịkpụzi igwe ga-enyere anyị aka ịnye gị e kwuru atụmatụ ozugbo o kwere omume.
Anyị na-atụ anya iru gị na miri emi na ogologo oge nkwado.
Ndị na-esonụ bụ isi ihe ọmụma gị akwụkwọ ：
Aha ngwaahịa Ebu ebu
Akpụzi Shaping China ahaziri plastic injection ebu
Ebu Steel S45C, P20H, 718H, 2738, S136, H13 wdg
Ngwaahịa Material Eyi, PC, PS, PAG, POM, Pee, Pu, ịkwanyere, ABS, PMMA, wdg
Ebu isi LKM, ISM, HASCO, DME
Oghere Single / Multi-cavity dị ka onye ahịa chọrọ
Ndụ ndụ 300,000 ~ otu nde gbaa
Nerdị ndị na-agba ọsọ Oyi / Ogba oso
Dị ọnụ ụzọ ámá Oghere Pin -point, ọnụ ụzọ ụgbọ okpuru mmiri, ọnụ ụzọ ámá, wdg
Oge Mbuga ozi 30 ~ 60 ụbọchị
Nkwakọ ngwaahịa Ọkọlọtọ Osisi
Gbọ njem Site n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku dị ka ndị ahịa chọrọ
Mbupụ Mba Gburugburu ụwa
The isi akpụzi Steel na ekweghị ekwe gị akwụkwọ:
Steel mezuwo NXC P20 P20HH 718H 2738H H13 S136 NAK80
Ekweghị ekwe (HRC) 17-22 27-30 33-37 33-38 36-40 45-52 48 ~ 52 34-40
Q: Ebee ka ụlọ ọrụ gị dị?
A: Heya akpụzi chọta na No.3, Houshi Road, Huangyan district, Taizhou obodo, Zhejiang, China Chile. Thers dị ihe dị ka nkeji 50 site na Luqiao Airport; 20 nkeji si Taizhou Railway Station. Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka ị bịa na ụlọ ọrụ anyị
Q: Otu esi aga ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
A: You nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ Heya Mold site na ụgbọ elu, ụgbọ oloko na bọs.
E nwere ihe dị ka awa 2 site na ụgbọ elu si Guangzhou gaa Taizhou obodo; 3 awa site na ike ọsọ okporo ígwè si Shanghai na Taizhou ojii; 1 hour ụgbọ okporo ígwè si Ningbo ma ọ bụ Wenzhou na Taizhou ojii. 3 awa site na bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko site na Yiwu ruo ọdụ ụgbọ Taizhou.
Q: Olee ụdị ozi dị mkpa maka nkwupụta ebu?
A: Ọ dabere na ngwaahịa gị, biko nabata ịkpọtụrụ Heya Mold iji kwupụta ya. Maka ihe kpatara ya, ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịnwere ozi ndị a n'okpuru:
1, Foto nlele nke nwere nha ma obu imewe 2D / 3D
2, Oghere dị ukwuu
3, Rundị ndị na-agba ọsọ, oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ
4, Mdị nchara ụdị, P20, 718, 2738, H13, S136,2316, na na.
5, igwe ogwu ntanye ma ọ bụ oke efere (eriri mkpịsị aka)
1) Ngwaahịa & Ebu ebu
Heya akpụzi ga-azụlite na imewe ngwaahịa & Ebu dị ka kwa ahịa 'chọrọ na anyị nwere ahụmahụ R & D otu. Ọ ga - enyere ndị ahịa anyị aka na mmepe ngwaahịa ọhụrụ, ma chekwaa ego nke ọrụ ọhụụ. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko kpọtụrụ ahịa anyị mgbe ọ bụla.
2) Otutu-eruba analysis
Heya akpụzi ga-eme ebu-eruba analysis dị ka kwa ahịa na-arịọ, zere nsogbu ọ bụla ọzọ nke ebu mmepụta.
3) Nhazi ebu
Heya akpụzi ga-emelite ndị ahịa plastic ebu ngwaọrụ ọganihu akụkọ kwa izu na-emekarị. Maka ọnọdụ a kapịrị ọnụ, anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo.
Heya akpụzi na-enye ihe osise zuru oke na akụkụ ahụ maka ndị ahịa tupu ebupu ya. Maka akụkụ ndị ọzọ, ị nwere ike izo aka na ndepụta anyị na ịzụta na ahịa gị.
5) Foto & vidiyo
Heya akpụzi ga ngwaahịa gị niile Ebu na-agba vidiyo maka 1years. Anyị ga-ezitere gị foto na vidiyo maka ịlele ma ọ bụ ịkọwa ebu na-agba ọsọ.
6) Ọrụ & Nkwukọrịta
Heya akpụzi ga-eme ka gị na ya nwee mmekọrịta gị na usoro a, site na nkwukọrịta teknụzụ na ọkwa izizi nke ọrụ a na-esote oge n'oge ọrụ nke ọrụ ahụ, na azụmaahịa ahịa ngwaahịa a na-ere. .
Nke gara aga: Oche Ọgwụ akpụzi
Osote: Onye isi oche
Stackable Plastic oche Ebu